Little Red Riding Hood, yakasarudzika iyo isingazombobuda kunze kwechimiro | Zvazvino Zvinyorwa
dzvuku Kutasva Hood
John Ortiz | | Biography, Vanyori, Fantasy, Type, Nyaya
Diki Red Riding Hood.
Kwakatangira shanduro inozivikanwa kwazvo ye dzvuku Kutasva Hood yakadzokera mukuunganidzwa kwemaakaunzi akataurwa kubva muzana ramakore rechiXNUMX nerechiXNUMX. Yekutanga yakanyorwa vhoriyamu yakatanga kubva muna 1697, uye inoratidzirwa nezvidimbu zvisina tsarukano zveiyo rondedzero. Gare gare, hama dzaGrimm dzakazvitora ivo pachavo kuti vadzivise izvo zvine hutsinye, pamwe nezvikamu zvekushushikana zvakasanganisirwa mushanduro dzekutanga dzemutambo.
Saizvozvo, mutongi weFrance Charles kutadza akawedzera hunhu (husina kutariswa kusvika ipapo) kuitira kuti yambiro ijeke kuvasikana maererano nenjodzi dzekuvimba nevasingazive. Vakoma Grimm zvakare vakadudzira zvinyorwa zvakanyorwa naLudwig Tieck mune yechipiri mubatanidzwa wakanzi Diki Red Riding Hood, rakaburitswa muunganidzwa wake wengano pfupi Kinder-und Hausmärchen.
1 Hama Grimm Biography
2 Little Red Riding Hood naCharles Perrault
3 Hama Grimm Shanduro
3.1 Ambuya vanorwara uye mhumhi
3.2 Hunyanzvi hwehumhi
3.3 Kununurwa kunoshamisa
4 Kuongorora uye madingindira e Little Red Riding Hood
4.1 Shanduko mukuguma uye kuteedzera kweesviro zvinhu
4.2 Iko kuenderera kwehunhu hwakakurumbira
4.3 Iwo mashiripiti chaiwo
4.4 Anogara aripo "Yin Yang"
4.5 Iyo yetsika yekushandisa kudzidza
4.6 Kuita vabereki zvisina kufanira
Hama Grimm Biography
Akazvarwa mumhuri yemabourgeois kuGerman, Jacob (1785-1863) naWilhelm (1786-1859) ndivo vaive vekare pavatanhatu vehama. Vakapedza degree remutemo kuYunivhesiti yeMarburg. Ikoko vakagadzira hukama hwehukama hwepedyo nanyanduri Clemens Brentano uye munyori wenhoroondo Friedrich Karl von Savigny, hushamwari hungave hunokosha kumabasa avo ekubatanidza.
Brentano aive zvekare folklorist, pamwe pesvedzero yake yaive yakakosha mumatanho e hama dzakapenga nezve hukuru hwerondedzero yakakurumbira pamusoro pemabhuku ane tsika. Wilhelm Grimm akazvipira zvakanyanya mukutsvagisa basa pane yepakati tsika. Kune rimwe divi, Jacob akasarudza kunyatsoongorora philology yemutauro wechiGerman.
Vakatamira kuYunivhesiti yeGöttingen muna 1829. Zvino, kubva muna 1840 zvichienda mberi, vakaramba vari muBerlin senhengo dzeRoyal Academy yeScience.. Kunze kwezvakakurumbira zvekuunganidzwa kwavo, Hama Grimm vakaburitsa zvinyorwa zvekudzidzisa uye mabasa ane chekuita nekutsvaga kwemitauro. Muchokwadi, ivo vakave ivo vekutanga vhoriyamu yekutanga yeGerman Dudziro uye - nekuda kwekuoma kwemutauro - haina kuzadzikiswa kusvika kuma1960.
Diki Red Riding Hood rakanyorwa naCharles Perrault
Iyi vhezheni yezana negumi nemanomwe vhezheni ine zvinongedzo zvakajeka zvehukuru hwevanhu hwedare raLouis XIV - yaive yaPerrault - pamwe chete nezvimwe zvinhu zvetsika yechiFrench. Mharidzo huru yechinyorwa ichi kutyisidzira vana vasina hanya kana kuti vane misikanzwa nekumiririra mhumhi sengozi chaiyo.
Zvisinei, the dzvuku Kutasva Hood Perrault's haina kunyatsotungamirwa kuvana, nekuti nzanga yaive nemaonero akasiyana nehucheche kubva nhasi. Chimiro chehumhi sekutyisidzira chaicho kunobva mukufa kwevafudzi kunokonzerwa nembwa (zvakajairika panguva idzodzo). Zvimwechetezvo, bere rinoreva zvakajeka kuvarume vakaipa, nezvido zvisina kunaka kuvasikana.
Hama Grimm Shanduro
Ambuya vanorwara uye mhumhi
Iye protagonist we Little Red Riding Hood akawana zita rake kubva kune tsvuku hood yaaigara akapfeka. Pakutanga kwenyaya aive musikana asina ruzivo uye ane rudo musikana, kunyanya akasungirirwa kuna mbuya vake. Rimwe zuva ambuya vake vakarwara, saka mai vaRed Red Riding Hood amai vavo vakamukumbira kuti auye nedengu rechikafu. Asi munzira mhumhi yakatanga kumutevera nekumubvunza. Musikana uyu akatsanangura kuti aienda kumba kwambuya vake kunomuvigira chikafu nekuti airwara.
Mhumhi yakaratidza kuti kana ikauya nemaruva, ambuya vayo vangatonyanya kufara kumuona. Ipapo, Little Red Riding Hood yaive nemufaro kutsauswa ichinhonga maruva apo bere richifamba. Paakasvika kwaaienda akavhura musuwo; Achinetseka, akafonera mbuya vake ... hapana akapindura, saka Little Red Riding Hood akaenda mukamuri, kwaakawana mhumhi yakazvivanza pamubhedha.
Mushure mekukurukurirana hurukuro (pamusoro penzeve, maziso, mhuno nemuromo webere) kunozivikanwa kuvana vese kwezvizvarwa, mhumhi yakapedza kudya musikana. Ipapo mhuka yakaipa yakatora hope dzakadzama kwazvo.
Muvhimi aipfuura padyo nekamuri akanzwa kuhonhora kwemhumhi ndokuenda kunomupfura nepfuti, asi akazvidzora achifunga kuti mukadzi wemba angave ari mukati. Chokwadi, nekuvhura dumbu remhumhi yakarara, muvhimi akakwanisa kununura Ambuya uye Little Red Riding Hood. Pakarepo mushure, akazadza dumbu nematombo uye imbwa yakafa nekurema kwayo. Chekupedzisira, mune yeGrimm hama 'vhezheni pane kuyedza kwechipiri kwakaitwa nemhumhi iyo zvakare yakaedza kunyengedza Little Red Riding Hood ... Asi musikana naambuya vake vakatungamira mhumhi nekunhuhwirira kwechikafu kumusungo werufu, mushure meizvozvo , hakuna mumwezve akaedza kuvakuvadza zvakare.
Kuongorora uye madingindira e dzvuku Kutasva Hood
Shanduko mukuguma uye kuteedzera kweesviro zvinhu
Shanduko dzakajeka dzinoitwa neHama Grimm ndiko kuwedzerwa kwemagumo anofadza uye kusiyiwa kwezvikamu zvinonyanya kutapira. Izvi zvichienzaniswa neshanduro dzapfuura uye nekuburitswa kwaCharles Perrault. Kunyangwe iyo subliminal mamiriro eiyo "inonzwa" hurukuro pakati pemhumhi neRed Red Riding Hood inochengetwa.
Iko kuenderera kwehunhu hwakakurumbira
Iwo anomiririra emhando dzevanhu misoro mune dzese shanduro dze dzvuku Kutasva Hood ndezvevane chinhanho chekuratidzira kwakakurumbira. Intertextuality inoratidzwa pachena mukati mebasa rose, sezvo mavara akafanana anoramba ari mumamiriro akasiyana mune dzese dzenyaya dzenyaya uye zvinyorwa zvakanyorwa. Nenzira imwecheteyo, mutauro unowanda unowanzoonekwa pamakirasi anozivikanwa kupfuura evapfumi vekuEurope.
Iwo mashiripiti chaiwo
Naizvozvo, zvekufungidzira uye zvemweya hazvigone kushayikwa. (semuenzaniso: muvhimi paanovhura dumbu remhumhi uye anowana Little Red Riding Hood ari mupenyu naambuya vake). Saizvozvowo, kuiswa kwemhumhi zvese zvinomiririra kutyisidzira chaiko kwenguva uye fananidzo yekushungurudzwa kwevarume vane zvinangwa zvisina kukodzera kuvasikana.
Anogara aripo "Yin Yang"
dzvuku Kutasva Hood ine chiratidzo chechinyorwa chevana zvinyorwa zvekusagadzikana kusingaperi pakati pezvakanaka nezvakaipa, Akasanganiswa nemusikana uye mhumhi. Zviripachena, Little Red Riding Hood inomiririra kusachena uye naivety yehucheche. Mukupesana, bere rinoshoreka zvachose, rakaipa uye rinokara. Pamusoro pezvo, nyaya iyi inobata nyaya yekukura kana ichitsanangura zvinokonzereswa nekusateerera kwemwanasikana nekuregeredza amai vake.
Iyo yetsika yekushandisa kudzidza
Nguva yekusateerera inoshandurwa kuita kudzidza pakupera kweshanduro yeHama GrimmEya, kana mhumhi yechipiri ikaonekwa, Little Red Riding Hood naambuya vake vagadzirira kuzvitarisira. Kushuvira ndeimwe yemisoro yakatsanangurwa, inoratidzwa mukukara kwakawanda kwemhumhi, iyo, isingagutsikane nekudya gogo vake, inodyawo Little Red Riding Hood.
Kuita vabereki zvisina kufanira
Sechinhu chakakosha, zvinogona kududzirwa kuti mai vaRed Red Riding Hood amai vane hunhu vasina hanya nekutumira mwanasikana wavo oga kusango.. Mukuunganidzwa kwehama dzaGrimm, kuvakwa kwevatambi vechipiri kunotsigirwa kwazvo, nekuti kana uchiongorora ambuya, mamiriro avo semunhu ari panjodzi ane mukurumbira, uyo anoda rubatsiro kuti ave nechokwadi chekugara zvakanaka.
Zviito zvakaipa zvemuhumhi zvinopedzisira zvaita kuti afe paruoko rwegamba rakanyarara (uyo anogona kufananidzira baba nemufananidzo unodzivirira): muvhimi. Yese yakasarudzika meseji ye dzvuku Kutasva Hood "Usataure nevasingazive", saka, yanga iri rondedzero yakapfuura miganhu, nguva uye makosi enharaunda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » dzvuku Kutasva Hood
Kukadzi. 7 akabatanidza zvinyorwa zvitsva kubva kuvanyori vanomwe